Ruka 7 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 7:1-50
Kutenda kwemukuru weuto (1-10)
Jesu anomutsa mwanakomana wechirikadzi kuNaini (11-17)
Johani Mubhabhatidzi anorumbidzwa (18-30)
Chizvarwa chisingateereri chinotsiurwa (31-35)
Mukadzi ane zvivi anoregererwa (36-50)
Mufananidzo wevanhu vaiva nechikwereti (41-43)
7 Paakanga apedza kutaura zvaaida kuudza vanhu, akapinda muKapenaume. 2 Paiva nemumwe mukuru weuto aiva nemuranda wake waaida chaizvo, uye muranda wacho airwara zvekuda kufa.+ 3 Paakanzwa nezvaJesu, akatuma vamwe vakuru vevaJudha kunomukumbira kuti auye kuzoporesa muranda wake. 4 Vakasvika kuna Jesu vakatanga kumuteterera nemwoyo wese, vachiti: “Akakodzera kuti mumubatsire, 5 nekuti anoda rudzi rwedu uye ndiye akativakira sinagogi.” 6 Saka Jesu akaenda navo. Asi paakanga ava pedyo nemba yacho, mukuru weuto akatuma shamwari dzake kuti dzinoti kwaari: “Changamire, musazvinetsa zvenyu, nekuti handina kukodzera kuti mupinde mumba mangu.+ 7 Ndokusaka ndaona ndisina kukodzera kuuya kwamuri. Asi taurai henyu shoko, muite kuti muranda wangu apore. 8 Nekuti neniwo ndiri pasi pevamwe, ndiine varwi vari pasi pangu, uye ndinoti kune uyu, ‘Enda!’ uye anoenda, uye kune mumwe, ‘Uya!’ uye anouya, uye kumuranda wangu, ‘Ita izvi!’ uye anozviita.” 9 Jesu paakanzwa mashoko aya, akashamiswa, akatarisa vanhu vazhinji vaimutevera akati: “Ndinokuudzai, handina kumbowana kutenda kwakakura kudai kunyange muIsraeri chaimo.”+ 10 Uye vaya vakanga vatumwa pavakadzokera kumba, vakawana muranda wacho apora.+ 11 Achingobva ipapo, akaenda kuguta rainzi Naini nevadzidzi vake pamwe nevanhu vakawanda. 12 Paakanga ava pedyo negedhi reguta, vakasangana nevanhu vakanga vakatakura murume akafa vachibuda naye kunze. Uyu akanga ari mwanakomana mumwe chete* waamai vake,+ avo vakanga vava chirikadzi. Vanhu vakawanda vaibva muguta vaivawo naamai vacho. 13 Ishe paakaona amai ava, akasiririswa navo,+ akati kwavari: “Musachema.”+ 14 Akabva aswedera pedyo navo, akabata hwanyanza,* uye vakanga vakamutakura vakamira. Akabva ati: “Jaya, ndinoti kwauri, muka!”+ 15 Murume wacho akanga akafa akabva agara, akatanga kutaura, uye Jesu akamupa kuna amai vake.+ 16 Vese vakatanga kutya, vakatanga kukudza Mwari, vachiti: “Muprofita mukuru amutswa pakati pedu.”+ Vakatiwo, “Mwari afunga vanhu vake.”+ 17 Uye zvaakaita izvi zvakapararira muJudhiya yese nemumaruwa ese akapoteredza. 18 Vadzidzi vaJohani vakaenda kunomuudza zvinhu zvese izvi.+ 19 Saka Johani akashevedza vamwe vadzidzi vake vaviri, akavatuma kunaShe kunobvunza kuti: “Ndimi here uya akanzi Anouya,+ kana kuti pane mumwe watinofanira kutarisira?” 20 Pavakasvika kwaari, varume vacho vakati: “Tatumwa naJohani Mubhabhatidzi kuzokubvunzai kuti, ‘Ndimi here uya akanzi Anouya, kana kuti tinofanira kutarisira mumwe?’” 21 Panguva iyoyo, akaporesa vanhu vakawanda vairwara,+ vaiva nezvirwere zvinotambudza, nemweya yakaipa, uye akaita kuti mapofu akawanda atange kuona. 22 Akavapindura achiti: “Endai munoudza Johani zvamaona nezvamanzwa, zvekuti: Mapofu ava kuona,+ vanokamhina vava kufamba zvakanaka, vane maperembudzi vari kucheneswa, matsi dziri kunzwa,+ vakafa vari kumutswa, uye varombo vari kuudzwa mashoko akanaka.+ 23 Anofara munhu asingawani chinomugumbura pandiri.”+ 24 Nhume dzaJohani padzakanga dzaenda, Jesu akatanga kubvunza vanhu nezvaJohani achiti: “Pamakabuda muchienda kurenje maienda kunoonei? Tsanga yaizununguswa nemhepo here?+ 25 Saka makaenda kunoonei? Munhu akapfeka zvipfeko zvakapfavirira*+ here? Nekuti vaya vanopfeka zvipfeko zvakapfavirira uye vanorarama upenyu hweumbozha vanogara mudzimba dzemadzimambo. 26 Saka makaenda kunooneiko? Muprofita here? Chokwadi, ndinokuudzai, anotopfuura muprofita.+ 27 Uyu ndiye akanyorwa nezvake kuti: ‘Inzwai! Ndiri kutuma nhume yangu ichafanokugadzirira nzira pamberi pako.’+ 28 Ndinokuudzai kuti, pavanhu vese vakararama* hapana kumbova nemukuru kuna Johani, asi mudiki kune vamwe vese muUmambo hwaMwari mukuru kwaari.”+ 29 (Vanhu vese nevateresi pavakanzwa izvi, vakabvuma kuti Mwari akarurama, nekuti vakanga vabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwaJohani.+ 30 Asi vaFarisi nevaya vainyatsoziva Mutemo vakaramba zano raMwari,+ sezvo vakanga vasina kubhabhatidzwa naJohani.) 31 “Saka vanhu vechizvarwa chino ndingavaenzanisa naani, uye vakafanana naani?+ 32 Vakafanana nevana vadiki vakagara mumusika vachishevedzera kuvamwe vavo vachiti: ‘Takakuridzirai nyere, asi hamuna kutamba; takaridza mhere, asi hamuna kuchema.’ 33 Saizvozvowo Johani Mubhabhatidzi akauya asingadyi chingwa kana kunwa waini,+ asi munoti: ‘Ane dhimoni.’ 34 Mwanakomana wemunhu akauya achidya uye achinwa, asi munoti: ‘Onai! Munhu anokara uye anonwisa waini, shamwari yevateresi nevatadzi!’+ 35 Kunyange zvakadaro, uchenjeri hunoratidzwa kuti hwakarurama* nevana vahwo vese.”*+ 36 Mumwe muFarisi akaramba achimukumbira kuti azodya naye. Saka akapinda mumba memuFarisi wacho, akagara kuti vadye. 37 Mumwe mukadzi aizivikanwa muguta racho kuti aiva mutadzi akanzwa kuti akanga achidya mumba memuFarisi wacho, uye akauya nechinu chearabhasta* chaiva nemafuta anonhuhwirira.+ 38 Akauya nekuseri kwake kwaiva netsoka dzake, akachema, uye akatanga kunyorovesa tsoka dzake nemisodzi yake, akadzipukuta nebvudzi rake. Uyewo akatsvoda tsoka dzake zvinyoronyoro, akadzidira mafuta anonhuhwirira. 39 MuFarisi ainge akoka Jesu paakazviona akati nechemumwoyo: “Dai munhu uyu aiva muprofita zvechokwadi, angadai aziva kuti mukadzi uyu ari kumubata ndiani uye kuti akaita sei. Angadai aziva kuti iye mutadzi.”+ 40 Asi Jesu akamupindura achiti: “Simoni, pane zvandiri kuda kutaura newe.” Iye akati: “Mudzidzisi, taurai henyu!” 41 “Paiva nevarume vaviri vaiva nechikwereti nemumwe munhu aiita zvekukweretesa; mumwe aiva nechikwereti chemadhinari* 500, mumwe wacho aine che50. 42 Pavakatadza kubhadhara zvikwereti zvavo, akangovaregerera vese. Saka pavaviri ava ndeupi achanyanya kumuda?” 43 Simoni akapindura achiti: “Ndinofunga kuti ndeuya waakadzimira chikwereti chakakura.” Iye akati kwaari: “Wapindura zvakanaka.” 44 Akabva atendeukira kumukadzi uya akati kuna Simoni: “Uri kuona mukadzi uyu? Ndapinda mumba mako; hauna kundipa mvura yekugeza tsoka dzangu. Asi mukadzi uyu anyorovesa tsoka dzangu nemisodzi yake, akadzipukuta nebvudzi rake. 45 Hauna kunditsvoda, asi mukadzi uyu haana kumbomira kutsvoda tsoka dzangu, kubvira pandapinda muno. 46 Hauna kudira mafuta mumusoro mangu, asi mukadzi uyu adira tsoka dzangu mafuta anonhuhwirira. 47 Nekuda kwezvaaita, ndiri kukuudza kuti kunyange zvazvo zvivi zvake zvakawanda,* zvaregererwa,+ nekuti aratidza rudo rukuru. Asi uya anoregererwa zvishoma, anoratidza rudo zvishoma.” 48 Akabva ati kumukadzi wacho: “Zvivi zvako zvaregererwa.”+ 49 Vaya vaakanga achidya navo vakatanga kutaurirana vachiti: “Munhu uyu ambori ani anotoregerera zvivi?”+ 50 Asi akati kumukadzi wacho: “Kutenda kwako kwakuponesa;+ enda hako nerugare.”
^ ChiGir., “akaberekwa ari ega.”
^ Hwanyanza kana kuti banda chinhu chaigadzirirwa kutakurisa chitunha.
^ Kana kuti “zvakanaka.”
^ ChiGir., “vakaberekwa nevakadzi.”
^ Kana kuti “hunorevererwa.”
^ Kana kuti “nezvibereko zvahwo.”
^ Kana kuti “zvakakura.”